Okuhambayo Kusukela Genoa Ukuze Florence ngu zemininingwane | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Qeqesha Ukuhamba Italy > Okuhambayo Kusukela Genoa Ukuze Florence ngu zemininingwane
Genoa, okuyinto ingxenye Rome noFlorence, okuyinto iyinhloko-dolobha ye-Italy Tuscany esifundeni, ezidumile izindawo izivakashi futhi yingakho umzila osuka eGenoa uya eFlorence uthandwa futhi uhanjwa njalo ibanga elingathintwa kalula. IGenoa itholakala Italy sika ntshonalanga ku Liguria esifundeni, is for indima ayifeza ukuhweba zasolwandle phakathi namakhulu eminyaka kwaziwa. Florence Itholakala ntshonalanga Italy futhi ngenxa yobuciko eminingi futhi ezihlukahlukene Renaissance eyaziwa izakhiwo futhi art, okuyinto zitholakala yonke indawo.
Kunezindlela eziningi ukuhamba futhi ukuthola phakathi kwawo womabili. I esheshayo ngendlela esheshayo ikhambo nakanjani iyona Genoa ukuze Florence zemininingwane.
Genoa ukuze Florence isitimela
Kunezinhlobo ezingaba ngu- 28 Genoa ukuze Florence Izitimela ne isitimela sokuqala esasitholakala ngagoduka lisuka ku- 00:02 kanye isitimela sokugcina isuka Genoa ngesikhathi 19:56. Eziningi zalezi izitimela zenzelwe usuku travel; Nokho, izitimela ukuthi ukusebenzisa kuhwalele noma ekuseni bavame ukuba amasevisi olele. Uhambo isikhathi sokuba Genoa ukuze Florence isitimela imayelana 2 amahora 58 amaminithi, ohleshulelwe isitimela ngqo akukho izinguquko. Uma kwenzeka kuba khona ushintsho maphakathi no-ngendlela uhambo isikhathi sokuba Genoa ukuze Florence isitimela lingafika 3 amahora 33 amaminithi, ezingasetshenziswa okwengeziwe ziyahlukahluka kuye ngosuku ikhambo.
Kukhona aziwa izitimela okumbalwa ngezimpelasonto futhi amaholide. Lokhu kuvame ukuba nomthelela ezikhathini luhambo kanye. Iningi izikhathi ukhetho engcono kungaba kokuhlola izitimela njengoba ngamunye usuku ikhambo lakho, okwakuyoholela ukucacisa kabanzi kuze kufike isikhathi Genoa ukuze Florence zemininingwane kubhekwa futhi kwakubaluleke kangakanani uhambo isikhathi kungaba.
Genoa ukuze Florence: Ezinye izindlela zokuhamba
Genoa ukuze Florence kuyinto umzila ethandwa futhi kungenziwa wakhuluma nge ibhasi, isitimela noma ngisho umgwaqo. Ngamunye the izindlela travel has ngisho ephethwe uhambo isikhathi kanye nemingcele ezidinga yabheka. Kukhona "RideShare" inketho iyatholakala okuyinto cishe indlela eshibhe ukuhamba kulo mzila futhi ingathatha cishe 3 amahora okuhambela ukuqedelwa. Kukhona futhi ukuthi ukhethe ngebhasi, okuyinto kuthatha cishe 4 amahora. Nokho, kukhona kuphela 2 namabhasi kulo mzila. Kukhethwa yokugcina ikhambo kuncike kuwe noma umuntu uhamba kuye ngokuthi yikuphi esikahle futhi zikhululekile njengoba ngamunye izintandokazi zabo.
Ukuthenga amathikithi esitimela eGenoa kuya eFlorence konga isikhathi sakho futhi “Gcina Isitimela” kukunikeza ithuba lokuthola iGenoa yakho ithikithi laseFlorence online. Ungase futhi uthole izaphulelo ezinhle ku yokubhuka ngezikhathi ezithile, sicela ungene ngemvume ku-Google ukuze SaveATrain ukubheka amasevisi abo nentengo ngaphambi kokuthi ubhukhe iGenoa yakho uye eFlorence amathikithi.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit nge isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-from-genoa-to-florence%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#genoa amathikithi izitimela travelflorence